Myanmar တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ၀ယ်၊ ရောင်း၊ ငှားမည် | Dot Property
အွန်လိုင်းမှာရွှေ့ပါ သင်၏ နောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် Myanmar တွင် ၀ယ်ရန် သို့မဟုတ် ငှာ Myanmar
ကွန်ဒို အိမ် မြို့ငယ်အိမ် Villa Apartment မြေ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ Office Retail Space Shophouse Warehouse / Factory Hotel / Resort
အနိမ့်ဆုံးဈေးLks 250Lks 500Lks 750Lks 1,000Lks 2,000Lks 3,000Lks 4,000Lks 5,000Lks 6,000Lks 7,000Lks 8,000Lks 9,000Lks 10,000Lks 20,000Lks 30,000Lks 40,000Lks 50,000Lks 75,000
အမြင့်ဆုံးဈေးLks 250Lks 500Lks 750Lks 1,000Lks 2,000Lks 3,000Lks 4,000Lks 5,000Lks 6,000Lks 7,000Lks 8,000Lks 9,000Lks 10,000Lks 20,000Lks 30,000Lks 40,000Lks 50,000Lks 75,000Lks 100,000
Beds1 အိပ်ခန်း2 အိပ်ခန်းမျာ3း အိပ်ခန်းများ4 အိပ်ခန်းများ5 အိပ်ခန်းများ
Grand Myakanthar Condominium
Yangon, Hlaing / ကွန်ဒို
Lotus Canal View Villas
Yangon, Hlaing, Hlaing / Villa
Platinum Pathein project
Yangon, Mingalar Taung Nyunt, Mingalar Taung Nyunt / ကွန်ဒို
Z Villas @ Luxury Bungalow
Yangon, Bahan, Bahan / Villa
Mandalay / ကွန်ဒို
The Pyay Tower & Residences
Yangon, Mayangone, Mayangone / ကွန်ဒို
ရှိုးကေ့စ်ဗီဒီယို : Golden City
A Luxurious Lobby, Refined Guest Room, Grand Ballrooms, Fine Dining, Fitness Centre, andaSPA Centre Facilitate Yangon’s high society lifestyle. With the dearth of high-end hotels in Yangon, the Royal Platinum Hotel undoubtedly defines the standard of exclusive living in Myanmar.
Here’s what you need to know about converting FSBOs in Southeast Asia
FSBO, otherwise known as for sale by owner, properties can be found in Southeast Asia. For real estate agents, turning these into your own listings can help create new opportunities. That being said, converting FSBOs in Southeast Asia isn’t easy. How…
What isaqualified property sales lead?
There isabit of confusion surrounding what isaqualified property sales lead these days. Some of that stems from the fact different real estate sites have tried to redefine what the term means. For real estate agents and developers, it is importan…
Go inside the hallmark hotel that occupies the top floors of Cambodia’s tallest building
The Vattanac Capital tower embodies the growth of Phnom Penh during the past decades and offers glimpse of what’s possible for the country in the future. The top 14 floors of the 187-meter building have been reserved for the luxurious Rosewood Phnom …
The tallest buildings in Cambodia: here’s what you need to know
Cambodia may not be the first place that springs to mind when you think about skyscrapers, but they are arriving in Phnom Penh. The skyline still remains relatively modest when compared to other Southeast Asian capitals, however, the past decade has …
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒေါ့ပရော်ပါတီ ၀က်ဘ်ဆိုက်၏အကြောင်း
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒေါ့ပရော်ပါတီသည် ရှာဖွေသူများကို ၄င်းတို့၏နောက်ထပ်အိမ်အား ရွေးချယ်ရန်ပိုင်ဆိုင်သူများ၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ များစွာထဲမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုပြခန်းသည် အသုံးပြုသူများအား ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းခြင်းများ အားလုံးကို အွန်လိုင်းမှ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒေါ့ပရော်ပါတီသည် ‘အွန်လိုင်းမှပြောင်းရွှေ့ခြင်း’ ကို ၄င်း၏ ရှာဖွေမှု ကိရိယာများ (ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားအားဖြင့်၊ တည်နေရာအားဖြင့်၊ အိပ်ခန်းအားဖြင့်၊ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ရှာဖွေခြင်း) အကူအညီဖြင့် ရိုးရှင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပြီး ၀ယ်ယူသူ၊ ငှားရမ်းသူများကို ၄င်းတို့၏ နောက်ထပ်ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်း၊ အိမ် သို့မဟုတ် ဗီလာများကို မြန်ဆန်လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်စေပါသည်။ ကမ္ဘောဒီးယား၏ အကောင်းဆုံးအိမ်များကို Borey Ataingmeas နိုင်ငံတကာအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်၊ Grand Phnom Penh နိုင်ငံတကာမြို့တော်နှင့် Bali အပမ်းဖြေရိပ်သာတို့ကဲ့သို့ နိုင်ငံအတွင်းရှိ အကောင်းဆုံး ဖန်တီးသူများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များဆီမှ ယူဆောင်ပြသထားပါသည်။ ဖနွမ်ပင်၏ အလယ်ခေါင်ရှိ ဘက်စလင်းတွင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုင်ယမ်ရိပ်တွင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်ဘက် ဆင်ခြေဖုံးတွင်ဖြစ်ဖြစ် သင့်အတွက်စောင့်နေသော အိမ်အသစ်တစ်လုံးကို တွေ့ရှိနိုင်ရန် ဒီနေ့ပဲရှာဖွေလိုက်ပါ။